Somaliland Oo Qaadacday Shirka Istanbul | Anti-Tribalism
← Shirkii Odayaasha Dhaqanka Soomaaliyeed oo Muqdisho ka furmay (SAWIRRO)
Khilaaf xoogan oo soo kala dhax galay Madaxweyne Shariif iyo Ra,isul wasaare Gaas →
Somaliland Oo Qaadacday Shirka Istanbul
Hargeesa (MMG) Maamulka Somaliland ayaa si rasmi u shaaciyay maanta in aysan ka qeybgaleynin shirka ka dhacaya bisha June ee sanadkan caasimada dalka Turkiga ee Istanbul, oo ay ka qeybagalayaan madaxda Soomaalida iyo qeybihii ka qeybgalay shirkii London.
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Maxamed C/laahi Cumar oo maanta saxaafadda kula hadlaayay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in Somaliland aysan ka qeybgali doonin shirka Istabul.
Wasiirka ayaa sheegay in shirkaas uusan wax ahmiyad ballaaran ugu jirin Somaliland wuxuuna yiri :” Somaliland waa ay adagtahay in ay ka qeybasho shirka Istambul, waayo sida naloo casuumay ayaan shaki ka aamisanahay” ayuu yiri Wasiirka Arimaha dibada somaliland Dr Maxamed Cabdilaah Cumar.
Wuxuu kaloo sheegay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland, in casuumada shirka Istanbul shaley la soo gaarsiiyay maamulkooda, wuxuu yiri ” Casuumada waxa ka muuqda in shirka looga hadli doono arrimaha siyaasada, iyo Road Map-ka, iyo arrimaha Dastuurka, marka waxa ka muuqda ma ahan kuwa cad” ayuu yiri Dr, Maxamed Cumar.
“Annaga waxa aan dooneynaa in shirka Istanbul uu noqdo midka London oo kale, marka midkan ma ahan sidaas” ayuu yiri.
Sidoo kale wuxuu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland in Somaliland aysan ka qeyb gali doonin shir la doonayo in lagu asnixiyo dastuurka Soomaaliya ee shaley ka furmay caasimada Muqdisho.
Wuxuu yiri ” Cid kasta oo ka qeybgasha shirka odayaasha dhaqanka Soomaalida waa dambiile qaran, maxaa yeelay Somaliland waxa ay lee dahay dastuur 31-sano ay isticmaaleysay, xittaa waa ceyb ah in maanta ay dhahaan maamulada ku howlan shirkan waxa an cuumnay odayaal dhaqameed ka soo jeeda deegano Somaliland ay ka arrimiso waa arrin ceyb ah” ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Somaliland.
Wuxuu yiri ” Shirkii Londan waxa aan uga qeyb galay si dowlad ka mid ah kuwa mandiqadan ku yaala, laakin kan ma ahan mid aan wali fahanay, marka waxa aan cadeenayaa in shirkaas uusan ahayd mid muuqda qaabka loo rabay, sidaa daraadeed kama qeybgali doono”
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in bisha June ee sanadkan shirweyn caalami ah ay u qaban doonto hoggaamiyaasha Soomaalida.
Si kastaba, waxa uu ku soo aadayaa hadalka wasiirka arrimaha dibadda Somaliland iyadoo shaley uu dib ugu soo laatay magaalada Hargeesa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID Faysal Cali Waraabe, kaa oo dhawaan magaalada Dubai ee dalka iskutaga immaaraadka carabta uu kula kulmay madaxweynaha KMG Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed,
Wuxuu sheegay haddi maamulka Somaliland uu ka qeybgalo shirka Istambul ay cadeeyeen in Somaliland ay ka mid tahay Somaaliya inteeda kale, ayna baabi’yeen hamigii Somaliland ay ka lahayd in ay noqoto dowladd madax banaan.
Xafiiska Wararka Hargeesa